Afrika, 27 November 2018
Talaado 27 November 2018
Abiy Ahmed oo la kulmay xisbiyada mucaaradka
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa maanta la kulmay xubnaha 81-ka xisbi mucaarad ee dalkaas, si uu ugala hadlo hab dib u habeyn loogu sameyn karo hanaanka doorashada dalkaas, sida uu sheegay xafiiskiisa.
W. Ruto oo Booqday W. Bari, Kenya
Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in Kenya ay ka shaqeynayso sidii ay si rasmi ah ugu furi lahayd xadka Kenya ee Somalia. Hadalkan ayuu ka sheegay safar uu ku tagay degmada Dadaab iyo Faafi oo ka tirsan maamulka deegaanka Garissa.
Kenya: 14 qof oo loo xiray haweeney la afduubtay
Ciidamada ONLF oo ku laabtay Itoobiya
Tobannaan ka tirsan ciidamada ururka ONLF ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Jigjiga iyadoo ay diyaaradi kasoo qaaday magaalada Asmara ee dalka Eritrea.
Kenya: Weerar dad lagu afduubay qaarna lagu dhaawacay
Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in xalay fiidkii ay koox ku hubaysan qoryaha AK 47 weerar ku qaadeen xarunta ganacsiga ee Chakama oo ku taala count-ga Kilifi, oo 80 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Milindi.
Ethiopia: Saraakiil la Eedeeyey
Xisbiga TPLF oo hogaamin jiray taxaafulka EPRDF oo dalka Ethiopia soo maamulayey muddo labaatan sano ka badan ayaa eed kulul u jeediyey xukuumadda cusub ee hormoodka ka yahay RWe Abiy Ahmed.
Ciidamada Kenya oo la siiyey qalab ay kula dagaalamaan Shabaab
Dad harraad ugu dhintay Dhadhaab
Hal qof ayaa inta la ogyahay oon oogu dhintay tuulada Sheebcad oo ku taala duleedka dagmada Dhadhaab halka boqolaal kale ay qarka u saaran yihiin oon daran.
Talyaaniga oo Soo Saaray Sharci Cusub oo Xaddidaya Muhaajiriinta
Reysal wasaare ku xigeenka dalka Talyaaniga ahna wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi, Matteo Salvini, ayaa sharci ku aaddan xaddidda soo galootiga soo saaray dhawaantan.
Boko Xaram oo 15 qof ku dishay Nigeria
Mintidiin la tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Boko Xaram, ayaa xalay 15 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen xaafado ku yaalla waqooyiga bari ee Nigeria, sida ay dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka Reuters.
Warbixin: Dumarka iyo siyaasadda Ethiopia
Kulan looga hadlayey amniga oo lagu qabtay Mandhera